Mohamed Salah & Sadio Mane Oo Guul Soo Laabasho Ah Liverpool Ku Hogaamiyay Iyaga Oo Guuldaro Gadhka U Galiyay Crystal Palace Oo Gool Kaga Hor Martay. – GOOL24.NET
Mohamed Salah & Sadio Mane Oo Guul Soo Laabasho Ah Liverpool Ku Hogaamiyay Iyaga Oo Guuldaro Gadhka U Galiyay Crystal Palace Oo Gool Kaga Hor Martay.
Liverpool ayaa guul dahabi ah oo soo laabasho ah ka soo gaadhay kooxda Crystal Palace oo gool kaga hor martay waxaana kulankii 100 aad horyaalka Premier League ee uu Jurgen Klopp maamulay kooxdiisa Reds guushan ku hogaamiyay gool ma gafe Mohamed Salah kaas oo gool taariikhi ah Reds saddexda dhibcood ugu saxiixay laakiin Sadio Mane ayaa ahaa xidigii Liverpool ciyaarta dib ugu soo celiyay goolka barbaraha u keenay.
Mohamed Salah ayaa barbareeyay rekoodh khaas u ahaa Cristiano Ronaldo iyo Robin van Persie kuwaas oo hore u ahaa labada xidig ee kaliya ee min 21 kulan oo Premier league ah goolal soo dhaliyay iyada oo Van Persie uu xili ciyaareedkii 2012-13kii uu awooday in 21 kulan oo PL uu goolal dhaliyay halka Cristiano Ronaldo uu 2007-08 kii isla rekoodhkan gaadhay laakiin Salah oo wali waqti badan haysta ayaa rekoodh cusub samayn doona.
Daqiiqadii 4-aad: Ciyaartoyda Palace ayaa cabasho u gudbiyay garsoorka kadib markii Robertson ay kubad gacanta uga dhacday, balse waxba lagama soo qaadin.
Daqiiqadii 8-aad: Palace ayaa u dhawaatay iney gool hesho markii Zaha uu abuuray fursad fiican, balse kubadaas marnaba gool ma noqon.
Daqiiqadii 11-aad: Van Dijk ayaa isku dayay inuu kooxdiisa uga faa’ideeyo kubad joog sare aheyd, balse madaxii uu tuuray Mane ayey ku dhacday.
RIGOODHE: Daqiiqadii 12-aad: Zaha ayaa kubad joog sare aheyd taabtay, balse si weyn ayey isugu dhaceen Karius taasoo keentay in garsooraha uu tilmaamo gool ku laad, kaarka jaalaha ayaana la siiyay goolhayaha reer Jarmal.
Daqiiqadii 13-aad: Milivojevic ayaa gool u badalay gool ku laadkii loo dhigay kooxdiisa, gees qaldan ayuuna u diray goolhaye Karius.
GO’AAN ADAG!: Daqiiqadii 24-aad: Sadio Mane ayaa isku dayay inuu garsooraha ku qasbo go’aan rigoore uu ku siinayo Reds kadib markii uu is tuur sameeyay sida muuqaalada kusoo celiska ay muujinayeen, balse garsoorka kuma kadsoomin wuxuu siiyay jaalle.
Daqiiqadii 28-aad: Mohamed Salah ayaa daafacyada Palace kubad ka hoos bixiyay balse kubadda waxey toos ugu tagtay Hennessey.
Daqiiqadii 40-aad: Mohamed Salah ayaa mar kale isku dayay inuu kubad daba mariyo goolhaye Hennesey waase laga diiday oo laga qabtay.
Daqiiqadii 44-aad: Hennessey ayaa badbaadiye ka noqday kubad gool loo fishay oo uu madaxa ku turay Sadio Mane, si cajiib leh ayuu u badbaadiyay ka hor inta uusan daafaca saarin.
Qeybta hore ciyaarta waxaa lagu kala maray 1-0, oo ay ku hogaamineyso Palace oo marti loogu ahaa gurigeeda.
Daqiiqadii 49-aad: Sadio Mane ayaa si dhibyar u dhameystiray kubad uu si fudud dhinaca midig uga soo caawiyay James Milner, gool barbaro ah ayuuna kooxdiisa u keenay.
FURSAD: Daqiiqadii 51-aad: Liverpool ayaa si cajiib leh weerar u agaasintay, balse Mohamed Salah ayaa ugu dambeyntii ku fashilmay inuu gool u badalo markii uu joog sare kubad ah damcay inuu ku khiyaano goolhayaha.
HALIS: Daqiiqadii 54-aad: Benteke ayaa lumiyay fursad qaali ah, kubad madax ah ayuu ka helay Townsend, balse kubadii uu ka helay xerada ganaaxa kama faa’ideysan meel qaldan ayuu u diray.
HALIS: Daqiiqadii 59-aad: Khasaarin aan la fileynin! Benteke ayaa qasaariyay mar kale kubad gool loo fishay, Townsend ayaa siiyay isagoo xerada ku sugan, balse hawada ayuu ku tolay.
BADBAADO: Daqiiqadii 62-aad: Van Aanholt ayaa ku dhawaaday inuu laad xor ah dhex dhigo shabaqa Liverpool, balse Karius ayaa si cajiib ah u badbaadiyay, badbadin qurux badan ayuu sameeyay.
FURSAD: Daqiiqadii 81-aad: Robertson ayaa halis ku galiyay Palace kubad uu ka helay Firmino, balse waxaa si awood leh u saaray Bissanka.
Daqiiqadii 84-aad: Mohamed Salah ayaa shabaqa soo taabtay, goolkii labaad ee Liverpool ay ka dhaliso ciyaarta ayuu nasiib u yeeshay, si qurux badan waxaa kubad usoo dhigay xerada ganaaxa Robertson, si fiican ayuu u qaatay wiilka reer Masar isagoo ku dhameystiray lugta midig.
Ugu danbayn Liverpool ayaa saddexda dhibcood xooga kaga soo qaadatay kooxda Crystal Palace waxayna ciyaartu ku dhamaatay 2-1 ay Reds dhinaca kale ugu dhigtay kooxda Palace oo markale lumisay natiijo ay ku heli kartay dhibato xili ciyaareedka kooxdeeda muhiim u ah.